#NNER #အဖွဲ့ဝင် #ကိုရဲဝင်းမှ #နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားထုအရေးပေါ်အစည်းဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် … | democracy for burma
#NNER #အဖွဲ့ဝင် #ကိုရဲဝင်းမှ #နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားထုအရေးပေါ်အစည်းဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် …
tags: အဖွဲ့ဝင် ကိုရဲဝင်းမှ, ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်။, Burma, Educationalists Network, Kachin Education Initiative Network, MIT Students, Myanmar, National Network for Education Reform, NNER, Pinnya Tagar Academy, Student Protest, Tai Youth Network
National Network for Education Reform – NNER
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားထုအရေးပေါ်အစည်းဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် NNER ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကို (၁၇.၁၁.၂၀၁၄) ခုနှစ်တွင် ထပ်မံ၍ ပူးပေါင်းထောက်ခံကြသော အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ…….
1) Pinnya Tagar Academy
2) Kachin Education Initiative Network
3) Kachin Peace Network
4) Kachin Women Peace Network
6) National Youth Congress
7) Center for Youth and Social Harmony
8) Kachin Youth Organization
9) Tai Youth Network
10) Ta Ang Student and Youth Organization (TSYU)
11) Ethnic Youth Network
12) MIT Students
13) PYO-Paoh Youth Organization
14) Civil Authorized Negotiate Organization-CAN-Org
15) Research and Translation Consultancy Cluster
16) Shan State Kachin Lawyers Network
17) Myanmar Open-Eyes Social Action (MOSA)
NNER အဖွဲ့ဝင် ကိုရဲဝင်းမှ
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားထုအရေးပေါ်အစည်းဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် NNER ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကို ဖတ်ကြားစဉ်
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားထုအရေးပေါ်အစည်းဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် NNER ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်။
နေ့စွဲ။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်။
ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနုိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် (NNER) သည် လွှတ်တော်နှင့်အစိုးရတို့မှ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေအပေါ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားထုအရေးပေါ် အစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုများကို အပြည့်အဝထောက်ခံပါသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေသည် ကျောင်းသားပြည်သူများ၏ဆန္ဒသဘောထားများကို မျက်ကွယ်ပြု၍ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့် ဆန့်ကျင်ကာ ရေးဆွဲအတည်ပြုထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် လွှတ်တော်နှင့်အစိုးရတို့က တာဝန်ရှိမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ အလေးထားမှုတို့နှင့်အတူ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းလုိုက်ပါသည်။
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေသည် နိုင်ငံသားတိုင်း၏အရေးဖြစ်သည့်အတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူ များ၏ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများကို မျက်ကွယ်ပြု၊ လစ်လျူရှုမည်ဆိုပါက ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးဆက်များသည် လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရတို့၏ တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်း သတိပေးအပ်ပါသည်။
ပညာရေးစနစ် ပြုပြုင်ပြောင်းလဲရေး နုိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် (NNER)
NNER တွင် ဦးဆောင်ပါဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ
၃။ တက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမအသင်းများ
၅။ ခရစ်ယာန်အခြေပြု ဓမ္မတက္ကသိုလ်နှင့် ကျောင်းများ
၆။ တိုင်းရင်းသားပညာရေး၊ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းများ
၈။ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း
၉ ။ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၁၀။ Educationalists Network
၁၁။ Thinking Classroom Foundation
← #UPDATE #19 ‪#‎ด่วน‬ ฮ. #รองแม่ทัพภาคที่3#ตก #คาดว่าเสียชีวิตทั้งลำ #9 #นาย @ #พะเยา
#BURMA #MYANMAR #clip #4TH #DAY #STUDENTS #PROTEST – #ဓာတ်ပုံ – ဖိုးသား/ပြန်ကြားရေး →